Fitaovana SEO - Famerenana ny SEOmoz Pro Toolset
Alakamisy Janoary 13, 2011 Zoma, Martsa 1, 2013 Douglas Karr
Search Engine Optimization (SEO) dia manakiana tanteraka amin'ny paikady fitomboana amin'ny Internet. Marina fa behemoth eny akaiky eny ny fiaraha-monina, saingy ny zava-misy dia 90% eo ho eo amin'ireo mpampiasa Internet no hanao fikarohana farafaharatsiny ao anatin'ny fivoriana an-tserasera. Ampifanaraho amin'izay ny zava-misy fa ny mpampiasa fikarohana mavitrika dia manana fikasana handray fanapahan-kevitra amin'ny fividianana matetika ... ary manomboka haingana ianao hahafantatra ny antony tokony hanana tetika an-tserasera an-tserasera feno izay ahitana ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Raha mbola tsy naka fotoana ianao handinihana Fitaovana SEOmoz Pro, Handrisika anao aho. Ny mahatsikaiky dia tsy mila Pro ianao raha hampiasa azy - ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny fitaovana dia afaka mandray olona liana amin'ny fanatsarana ny laharan'ny motera fikarohana ary manome azy ireo fitaovana feno ilaina hanatsarana ny tranonkalany ary hihoarana ny fifaninanana. Izahay dia nanakodia fonosana ho an'ny mpanjifanay tsirairay.
Ireo olona mahafinaritra ao amin'ny SEOmoz dia namela anay hanome kaonty ihany koa tamin'ny fankalazana ny lahatsoratra bilaogy 2,500 - izay nandresen'i Mack Earnhardt avy amin'ny Agile Reasoning. (Mbola misy valiny iray taonina - aza hadino izany Mifandraisa aminay ny gazetinay amin'ny fipihana ny rohy famandrihana ao amin'ny lohateny).
Ho fisaorana anao dia te-hanoratra famerenana lalina kokoa aho izay miresaka momba ireo fiasa telo matanjaka indrindra amin'ny SEOmoz Pro Toolset:
Fizahana diagnostika isan-kerinandro sy fanarahana laharana: Ny rindrambaiko dia mandady ny tranokala isan-kerinandro ary mampandre ny mpampiasa ny olana mety hisy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny laharana. Ny teny lakile dia zahana amin'ny laharana ao amin'ny Google, Bing, ary Yahoo manohitra ny mpifaninana.
Fanadihadiana rohy mifaninana: Fantaro izay tranonkala mampifandray amin'ireo mpifaninana aminao, manampy azy ireo hanana laharana tsaratsara kokoa. Tanjemo ireto tranonkala ireto mba tanisaina ary hanatsara ny fahaizanao manokana.
Fanatsarana ny pejy: Saripika momba ny fomba fampandehanan'ny teny lakile an'ny mpampiasa. Ny naoty mora sy ny famakafakana pejy an-tsipiriany dia manampy amin'ny kendrena ireo faritra lehibe indrindra hanatsarana sy hanome tolo-kevitra amin'ny antsipiriany momba ny fanatsarana ny fanatsarana eo amin'ny pejy.
Raha toa ianao ka any Etazonia no kendrenao ny mpihaino ary mitady hanara-maso, handinika ary hanatsara ny valin'ny motera fikarohana ianao, SEOmoz Pro dia fitaovana ilaina.
Tags: seomozfitaovana seomoz
Marketing amin'ny haitao: ny Apple Formula
Ireo ABC an'ny fanatrehana an-tserasera
Mar 1, 2011 ao amin'ny 4: PM PM
Hey Douglas Vao tsy ela akory izay no nandraisako ny SEOmoz tamin'ny fitsapana maimaimpoana 1 volana 🙂… Vao nitady hevitra kely fotsiny aho dia nahita ity lahatsoratra ity, fanoratana tsara! Tsy mbola nahita ny fotoana hampiasana ny kaontiko aho fa tsy ho ela dia te hahafantatra raha hanoratra manontolo andro! Manonona ny mpihaino kendrena amerikana ianao, any Angletera aho ary mikendry indrindra ny UK ary ho an'ny mpanjifa sasany any Eropa koa - mety hahasoa ahy ve izany?
Salama Chester, mety te hijery gShiftLabs ianao, avelany hanaraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ianao.
Mar 1, 2011 ao amin'ny 5: PM PM
Misaotra ny tolo-kevitra tsy andehanako mijery izao 🙂
26 Jun 2011 amin'ny 5:48 AM
Salama Douglas, nampiasa nandritra ny volana vitsivitsy izahay SEOmoz Pro niaraka tamin'ny mpanjifa eo an-toerana any Filipina ary mety tsara izany. Tsy azonao antoka raha misy zavatra tsy ampy amiko. Mikarakara ny famelabelarana? Misaotra!
26 Jun 2011 amin'ny 6:24 AM
Tsara re izany! Fony aho nanandrana nanandrana valim-panadinana eropeana sasany tamin'izany fotoana izany dia tsy nahazo info be loatra aho Homeko tadio iray hafa izy!
Aug 22, 2011 amin'ny 3: 36 AM
Hotsapaiko izany. Malalaka ny manandrana mandritra ny iray volana. Ka, avelao hahita.
Apr 29, 2012 ao amin'ny 3: PM PM
misaotra, famerenana mahaliana izany
May 28, 2012 amin'ny 10: 16 AM
SEOmoz napetraka fitaovana dia tsy maintsy ananana SEOs sy ny olona rehetra izay matotra amin'ny milina fikarohana ary te hitondra ny tranonkalany amin'ny pejy voalohany amin'ny motera fikarohana lehibe vantany vao azo atao.
May 28, 2012 ao amin'ny 6: 04 PM
Misaotra anao nizara ny hevitrao. Na dia ianao aza dia famerenana tsotra, nahazo ahy ity fehezanteny ity: tsy natao ho an'ny pro. Natahotra aho sao ho very fotoana sy ezaka be. Misaotra!
Halako fotsiny ny fandaniany ny carte de crédit, tiako ny mandoa paypal.